Ankadikely Ilafy : Jeneraly voatafika tamina basy kilalao
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → janvier → 20 → Ankadikely Ilafy : Jeneraly voatafika tamina basy kilalao
Redaction Midi Madagasikara 20 janvier 2016 6 Commentaires
Efa tena sahy ry zalahy. Basy kilalao no nentina, nakàna basy tena izy sy nanafihana manamboninahitra jeneraly iray teny amin’iny faritra Ankadikely iny, omaly vao maraina. Ambonin’ny PA azon’ireo olon-dratsy, lasa ihany koa vola an-tapitrisany tao anaty “coffre”.
Tokony ho tamin’ny roa ora sy fahefany maraina teo no niseho ity fanafihana somary nahazendana ny maro ity. Tranona jeneraly iray no notongavana efa-dahy mirongo zava-maranitra sy basy … kilalao. Raha araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary dia angamba jiolahy vao mikasa ny hiditra eo amin’izany sehatry ny asa ratsy izany ry zalahy ireto. Miaramila no handeha hotafihana kanefa na ny fitaovana aza tsy ampy akory. Tsy misaron-tava mantsy ny telo lahy tamin’izy ireo, ny iray kosa, ny akanjo nanaovany ihany no mody nanaro-tsaromany ny tarehiny. Izy rehetra dia samy tsy nanao kiraro avokoa. Na izany na tsy izany anefa, vitan-dry zalahy ihany ny asa ratsiny. Azony izay nilainy, ny basy sy ny vola tao amin’ity manamboninahitra ity. Tetsy andanin’izay kosa, tsy nanaiky nolembenana ilay jeneraly fa niezaka namaly. Na teo aza anefa ny filazan’ireo mpanoratra ny amin’ny hoe, ny Jeneraly iray, mendrika ny hitondra izany anarana izany dia mitovy amin’ny herin’ny miaramila iray alina, tsy nandaitra izany teto. Tratran’ny be noho ny vitsy ny lehilahy, ka nilavo lefona. Naratra vokatr’izany rahateo izy. Nahitana mangana teo amin’ny tanany sy ny tarehiny raha ny vaovao azo hatrany. Noteren’ireo olon-dratsy hamoaka sy hanome azy ireo ny basiny tamin’izay ity manamboninahitra ity. Hitan’iretsy voalohany ihany koa ny “coffre” hazo nihidy “cadenas”. Vola mitentina roa tapitrisa ariary teo ho eo no nentin’izy ireo. Azon’izy ireo izay nilainy, dia nitsoaka izy ireo. Tsy vitan’izany anefa, mbola nikasa hanafika ny trano teo ankilan’ity trano ireo olon-dratsy, izay tsy an’iza fa an’ny zanak’ity manamboninahitra ity hatrany. Voasakan’ ny “grille de protection” anefa izy ireo ka tsy afaka. Nitsoaka nihazo nianatsimo tany ireto jiolahy ireto, raha ny vaovao hatrany. Nahetsika avy hatrany ireo zandary teny amin’iny faritra iny, taorian’ity fanafihana manamboninahitra ity. Nisy ireo nitsongo dia avy hatrany ireo mpanafika. Manao savahao ny manodidina ny tanàna kosa ny hafa. Fantatra fa nampanantsoina alika mpitsongo dia mihitsy, hikarohana ireo nahavanon-doza. Raha ity tranga ity tokoa no dinihana, raha hoe hatramin’ny lehibe mpitarika mpitandro filaminana no efa sahin’ny jiolahy “mpiana-draharaha” tafihana, ahoana izany ny amin’ireo vahoaka tsy mandady harona ?
RAZ'L 21 janvier 2016 at 16 h 06 min · Edit
Ka tena mampalahelo ny zava-misy e! Raha « officier général » izany kosa no matahotra basy kilalao dia tena mampivarahontsana e! « officier général » aza manao an’izany…Manao ahoana izany ireo ambiny sisa???? AIZA HO AIZA ANEFA IZANY LAZAN’NY MIARAMILA MALAGASY TALOHA IZANY; INDRINDRA TAMIN’NY « 2eme GUERRE MONDIALE »: NY MALAGASY IRERY NO NAHAVITA NANAKANA NY FIROSOANA MAHERY VAIKA SADY HAINGANA NATAON’NY « ALLEMAND » NANDRITRA NY « BLITZKRIEG »!!!!!Tany Frantsa io. Ary mbola tsaroan’ny Rainiboto mandraka androany izany. Ankehitriny anefa…. TENA MAMPAHONENA e!
Menalahy 21 janvier 2016 at 13 h 25 min · Edit
Manao ahoana hianao Razily â ! Tratry Taona.
Hianao ity dia tena manapaka ny tsinaiko kah !
Ireo ange ilay antsoina hoe « jeneraly kapisily » ê ! Ka izay no tsy ahafahany manasaraka ny tena « grade » sy ny « kapisily » nomena aza tsy nisy antony (cadeau Bonux hoy ry zalahy izay).
Jereo ange fa ny antsika dia misy izany « géneral de brigade aérienne » izany kanefa mba aiza ity « brigade aérienne ity » fa i Air Malade aza no antsika ?
Misy koa hono izany capitaine de corvette izany kanefa mba aiza ny « corvette » hafa tsy ny « boutre » sy ny « pirogue à balancier ».
Hiomehezan’ny olona isika fa soa hiany fa « le ridicule ne tue pas » hoy ry zareo vazaha !
Lazalazao Tsimiamboholahy 21 janvier 2016 at 0 h 37 min · Edit
Tsy nis maty ? Raha izao no mitranga dia izao ilay hoe zava-dratsy hiteraka zavatra tsara, satria ny miaramila nampijaly vahoaka dia mba hiaran’ny tsy fandriampahalemana koa, sady mety mba hampihetsika azy ireo hanjika olo-ndrattsy fa tsy handany andro hanejika ny vahoaka mitaky ny rariny, etsy andaniny. ireo Jiolahy henjehina ary mety ho azo etsy ankilany.
Marika 20 janvier 2016 at 14 h 57 min · Edit
mr 20 janvier 2016 at 9 h 57 min · Edit
manamboninahitra sa MananJaoridira ? Ary vao niampy 30 reo fakofakon’olona ireo arakin’ny revirevin’ny sefon-jareo vao tsy ela izay ! Inona moa no tokony ahamenatra satria iza no tsy mahalala fa MILISIN’ny mpanongam-panjakana ny eto Mada fa tsy misy izany tafi-bahoaka izany mihintsy.
RAZ'L 20 janvier 2016 at 9 h 19 min · Edit
Izao no alehany rehefa be « kintana » amin’ny tsy izy!!! BASY KILALAO AVY DIA « MAMPITSATSAKA » AN-DRANGAHY MIARAMILA!!!! Amin’izay izy dia nisy P.A. tao an-tranony!!! Mety tsy hainy akory aza izao ny mampiasa an’io!!!! Raha izany angamba no miady any Syrie dia mahavita misitrika miafina ao anaty zipon’ireo Mpiady « Kurdes » vehivavy mihitsy.